Iindaba -Iintshatsheli Umsonto uphehlelela umgca weRenu we-100% yokurisayikilisha imisonto
Ikomkhulu le-Gastonia, iChampion Thread Inkampani (i-CTC), umboneleli wehlabathi wentambo, umsonto, kunye nezinto ezahlukeneyo zemveliso ethungelweyo, usungule umgca weRenu kuyo yonke indawo, imisonto yokuthunga ehambelana nokusingqongileyo enziwe ngokupheleleyo kwizinto ezingezizo ezentombi. Imisonto eyi-100 yepesenti eyenziwe ngomsonto inika ukhetho oluhlaza ngaphandle kokuncama ukusebenza kokuthunga.
I-Renu okwangoku iqulethe iinguqulelo ezinobuhlobo kokusingqongileyo kwezinto ezintathu ezijikeleze imisonto yepolyester enezicelo ezibanzi kwifashoni, ifanitshala, umatrasi, iPPE, umzi mveliso, kunye namanye amacandelo emveliso.
"Siyazingca ngokunika ezi zisombululo zizinzileyo," utshilo umongameli we-CTC uMatt Poovey. Umgca weRenu ujongana nokukhula kweshishini kunye nemfuno yabathengi yeemveliso ezenziwe ngezinto ezingezizo ezinyulu. Ezi 100 zeepesenti zenziwe zarhoqo iintambo zenzelwe ukuba zenze ukuba abathengisi, iimveliso kunye nabavelisi bakwazi ukuhlangabezana neenjongo zabo zokuzinza kunye nokuzibophelela ngelixa begcina imveliso, ukusebenza komthungo, ukungagungqi, kunye neempawu zokuchasana neekhemikhali abazonwabisayo kunyathela lwepolyester yethu yemveli. ”
Kuqinisekiswe ukuba azinazinto eziyingozi phantsi kwe-Oeko-Tex Standard 100, ulungelelwaniso lwangoku lweemveliso ze-eco-friendly ezibandakanya iRenu ChampSpun ephinda isetyenziswe istople spun polyester thread, iRenu Poly ChampCore iphinde isetyenziselwe intambo esongelwe ipholiyesta enesiseko sezinto ezininzi, kunye neRenu AeroTex Plus iphinde yaphindwa yasetyenzwa ngombala wepolyester. Iimveliso zeRenu zinegalelo kuqoqosho olujikelezayo ngokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla, inkunkuma, kunye nokuxhomekeka kweoyile. Benzelwe i-CTC imigangatho yomgangatho ogqithileyo kwaye bagqityiwe ngezinto zabo zokuthambisa ukuqinisekisa imveliso ephezulu.
Iimveliso zeRenu zimele ukuzibophelela kwe-CTC 'ekuqhubeleni phambili umsonto oqhelekileyo'.
Ukusukela ngo-1979, iChampion Thread Inkampani (i-CTC) ijolise kwimisonto yayo yokuthunga, intambo eyenziwe ngobunjineli, izinto zokucheba, kunye nobuchwephesha obungenakulinganiswa bokunceda ukuthungwa kweempahla, iimpahla ezikhuselayo, iimpahla zasekhaya, iimoto, ezolimo, ezemizi-mveliso, kunye nabanye abenzi basombulula imveliso yabo, imveliso, kunye nemingeni yesixokelelwano sonikezelo.
Ikwindawo eseGastonia, eMantla Carolina, ishishini elilelosapho kunye nelisebenza lizinikele ekuboneleleni ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kumaxabiso okhuphiswano kwaye lizahlula ngokwazisa ngenkxaso yabathengi engenakuthelekiswa nanto kunye nentsebenziswano nabaxhasi.